Contact Lenses (Steps to Wear) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မင်းသမီးလေးတွေ ၊ အဆိုတော်လေးတွေ မျက်ကပ်မှန်ရောင်စုံနဲ့လှနေလို့ မျက်ကပ်မှန်ဝယ်ထားပြီး မတပ်ရဲလို့မတပ်ရတာမျိုး ဖြစ်ဘူးပါသလား?
မျက်ကပ်မှန်ကို စနစ်တကျ လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ပြီး မျက်စိအန္တရာယ် ကင်းစေဖို့ အဆင့်လေးတွေ ၁၀ ဆင့်ပဲရှိပါတယ်။
၁) မျက်ကပ်မှန်ကိုမကိုင်ခင် လက်၂ ဖက်လုံးကို ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့နဲ့ပွတ်တိုက်ပြီးဆေးပါ။
၂)မျက်ကပ်မှန်ဘူးကိုမဖွင့်ခင် မျက်ကပ်မှန်အနားလေးတွေမှာပြဲတာ ရှိမရှိကြည့်ပါ။
၃) မျက်ကပ်မှန်ကိုင်ဖို့ လက်ညိုးထိပ်ကိုသာအသုံးပြုပါ။ ( သတ်ပြုဖို့မှာ လက်သည်းနဲ့မျက်ကပ်မှန်လုံးဝမထိပါစေနဲ့။ ပေါက်ပြဲသွားနိုင်အောင်မျက်ကပ်မှန်ကနူးညံ့ပါတယ်။)
၄) မျက်ကပ်မှန်ဝယ်ပြီးခါစ အသုံးမပြုခင်မှာ မျက်ကပ်မှန် သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ ၆နာရီခန့်ကြာအောင် စိမ်ထားပါ။ နောက်အကြိမ်တွေမှာလည်း မျက်ကပ်မှန်သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့သုံးပြီးတိုင်းသန့်စင်ပေးပါ။( သတ်ပြုရန်မှာ မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်မှလွဲ၍ ရေသန့်၊ ဘုံဘိုင်ရေတို့နှင့်မျက်ကပ်မှန်ကို မဆေးပါနဲ့)
၅) လက်တစ်ဖက်နဲ့ အပေါ်မျက်ခွံကို ဆွဲထားပါ။ နောက်လက်တစ်ဖက်ရဲ့လက်သူကြွယ်နဲ့အောက်မျက်ခွံကိုဆွဲထားပြီး လက်ညှိုးနဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကို မျက်လုံးအိမ်အမဲရှိရာနေရာကို ထည့်လိုက်ပါ။
၆) မျက်ကပ်မှန်မျက်လုံးထဲဝင်သွားပြီးတာနဲ့ အပေါ်မျက်ခွံကို လွှတ်လိုက်ပါ။ မျက်ခွံပိတ်ပြီး ၂ချက်၊ ၃ချက်ခန့် မျက်တောင်ခတ်လိုက်ပါ။မျက်ကပ်မှန် အလည်ဗဟိုကျစေဖို့ မျက်ခွံပေါ်က လက်ညှိုးလေးနဲ့ စက်ဝိုက်းပုံ ခပ်ဖွဖွ နှိပ်ပေးပါ။
၇) မျက်ကပ်မှန်ကိုပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မျက်ခွံကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားပြီး မျက်လုံးကို ထောင့်ကပ်ပြီးကြည့်ထားပါ။ ပြီးရင် လက်မ၊ လက်ညှိုးနဲ့ ညင်သာစွာဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။
၈) မျက်ကပ်မှန်ကို လက်ဖဝါးအလယ်မှာထားပြီး မျက်ကပ်မှန်သန့်စင်ဆေးရည် ၆စက်ခန့်ထည့်ပြီးဆေးပါ။
၉) ပြီးရင် သန့်စင်တဲ့လက်ညှိုးထိပ်နဲ့ အကြိမ် ၂၀ခန့် လက်ဖဝါးပေါ်မှာ စက်ဝိုက်းပုံလှည့်ပြီးဆေးကြောပေးပါ။
၁၀) မျက်ကပ်မှန်ဘူးထဲက မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်အဟောင်းကိုသွန်ပါ။ ဆေးရည်အသစ်ထဲမှာမျက်ကပ်မှန်တစ်ခုလုံးမြှပ်အောင်ထည့်ပါ။ ( သတိပြုရန်မှာ မျက်ကပ်မှန်ဘူးကို ၃လ တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပေးရန်လိုပါသည်။)
မင္းသမီးေလးေတြ ၊ အဆိုေတာ္ေလးေတြ မ်က္ကပ္မွန္ေရာင္စံုနဲ႔လွေနလို႔ မ်က္ကပ္မွန္ဝယ္ထားၿပီး မတပ္ရဲလို႔မတပ္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ဘူးပါသလား?
မ်က္ကပ္မွန္ကို စနစ္တက် လြယ္လြယ္ကူကူတပ္ၿပီး မ်က္စိအနၱရာယ္ ကင္းေစဖို႔ အဆင့္ေလးေတြ ၁၀ ဆင့္ပဲရွိပါတယ္။
၁) မ်က္ကပ္မွန္ကိုမကိုင္ခင္ လက္၂ ဖက္လံုးကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔နဲ႔ပြတ္တိုက္ၿပီးေဆးပါ။
၂)မ်က္ကပ္မွန္ဘူးကိုမဖြင့္ခင္ မ်က္ကပ္မွန္အနားေလးေတြမွာျပဲတာ ရွိမရွိၾကည့္ပါ။
၃) မ်က္ကပ္မွန္ကိုင္ဖို႔ လက္ညိဳးထိပ္ကိုသာအသံုးျပဳပါ။ ( သတ္ျပဳဖို႔မွာ လက္သည္းနဲ႔မ်က္ကပ္မွန္လံုးဝမထိပါေစနဲ႔။ ေပါက္ျပဲသြားႏိုင္ေအာင္မ်က္ကပ္မွန္ကႏူးညံ့ပါတယ္။)
၄) မ်က္ကပ္မွန္ဝယ္ၿပီးခါစ အသံုးမျပဳခင္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ သန္႔စင္ေဆးရည္နဲ႔ ၆နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ စိမ္ထားပါ။ ေနာက္အႀကိမ္ေတြမွာလည္း မ်က္ကပ္မွန္သန္႔စင္ေဆးရည္နဲ႔သံုးၿပီးတိုင္းသန္႔စင္ေပးပါ။( သတ္ျပဳရန္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္မွလြဲ၍ ေရသန္႔၊ ဘံုဘိုင္ေရတို႔ႏွင့္မ်က္ကပ္မွန္ကို မေဆးပါနဲ႔)
၅) လက္တစ္ဖက္နဲ႔ အေပၚမ်က္ခြံကို ဆြဲထားပါ။ ေနာက္လက္တစ္ဖက္ရဲ႕လက္သူႂကြယ္နဲ႔ေအာက္မ်က္ခြံကိုဆြဲထားၿပီး လက္ညႇုိးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ကို မ်က္လံုးအိမ္အမဲရွိရာေနရာကို ထည့္လိုက္ပါ။
၆) မ်က္ကပ္မွန္မ်က္လံုးထဲဝင္သြားၿပီးတာနဲ႔ အေပၚမ်က္ခြံကို လႊတ္လိုက္ပါ။ မ်က္ခြံပိတ္ၿပီး ၂ခ်က္၊ ၃ခ်က္ခန္႔ မ်က္ေတာင္ခတ္လိုက္ပါ။မ်က္ကပ္မွန္ အလည္ဗဟိုက်ေစဖို႔ မ်က္ခြံေပၚက လက္ညႇုိးေလးနဲ႔ စက္ဝိုက္းပံု ခပ္ဖြဖြ ႏွိပ္ေပးပါ။
၇) မ်က္ကပ္မွန္ကိုျပန္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မ်က္ခြံကိုလက္တစ္ဖက္နဲ႔ဆြဲထားၿပီး မ်က္လံုးကို ေထာင့္ကပ္ၿပီးၾကည့္ထားပါ။ ၿပီးရင္ လက္မ၊ လက္ညႇုိးနဲ႔ ညင္သာစြာဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။
၈) မ်က္ကပ္မွန္ကို လက္ဖဝါးအလယ္မွာထားၿပီး မ်က္ကပ္မွန္သန္႔စင္ေဆးရည္ ၆စက္ခန္႔ထည့္ၿပီးေဆးပါ။
၉) ၿပီးရင္ သန္႔စင္တဲ့လက္ညႇိုးထိပ္နဲ႔ အႀကိမ္ ၂၀ခန္႔ လက္ဖဝါးေပၚမွာ စက္ဝိုက္းပံုလွည့္ၿပီးေဆးေၾကာေပးပါ။
၁၀) မ်က္ကပ္မွန္ဘူးထဲက မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္အေဟာင္းကိုသြန္ပါ။ ေဆးရည္အသစ္ထဲမွာမ်က္ကပ္မွန္တစ္ခုလံုးျမႇပ္ေအာင္ထည့္ပါ။ ( သတိျပဳရန္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ဘူးကို ၃လ တစ္ႀကိမ္လဲလွယ္ေပးရန္လိုပါသည္။)
Baby and Cow’s Milk(1)